Maxkmadda Ciidamada qalabka sida oo dacwad loo gudbiyay.
Warqad soo gaartay RAdio Sagal ayaa tilmaameysa in maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya loo gudbiyay dacwad ka dhan ah Agaasimaha Hey’adda Nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Xuseen Cismaan Xuseen iyo ku xigeenkiisa Fahad Yaasiin , dawacdda ayaa waxaa gudbiyay taliye ku xigeenki hore ee hay’adaasi cabdallada Cabdalla Maxamed ee shalay madaxweyne Farmaajo uu ka xayuubiyay darajooyinkii ciidaan ee uu huganaa.
General Gorod oo uga digey ciidamada Milatariga in ay fasax la’aan magaalada hub ku dhex qaataan
Taliyaha Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdiwali Jaamac Xuseen Gorod ayaa ka hadlay isku dhacyada ciidamada ku dhex mara magaalada Muqdisho isagoo digniin kasoo saaray Isku dhacyadaas.
Madaxweyne Farmaajo oo casho sharaf u sameeyay Golaha Amniga Qaranka
Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa xalay casho sharaf soo dhaweyn ah Madaxtooyada ugu sameeyey Golaha Amniga Qaranka.
Maxkamadda Ciidamada oo xukun ku riday eedeysanayaasha loo heystay Qaraxii Zoobe
Maxkamadda Ciidamada qalabka sida ayaa xukun ku riday eedeysanayaasha loo heystay Qaraxii Zoobe ee boqolaalka qof ay ku dhinteen 14-kii October ee sanadkii 2017.
G/sare Liibaan Cali Yarow “Maxkamadda Ciidamada inta ay dhisan tahay 29 dil ma fulin”
Sagal Radio Services • News Report/Opinion • October 10, 2015
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Ciidamada qalabka sida G/sare Liibaan Cali Yarow ayaa beeniyay warbixin ka soo baxday Midowga Yurub ee looga hadlay xukunada ciqaabta dilka ah ee ay fuliyaan Maxkamadaha Milateriga, isagoo ku tilmaamay warbixintaas mid qaldan oo aan raad laheyn.
Guddiga Isku dhafka Ciidamadda Xogga dalka Soomaaliyeed, ayaa maanta loosoo xiray siminaar soconayay muddo 5 cisho ah, kaas oo looga hadlayay qaabka ugu habboon ee si wadajir looga qeyb qaadan karo isku dhafka Ciidamadda. Waxana munaasabadaas goob-joog ka ahaa Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya, Mudane C.qaadir Sheekh Cali Diini, Taliyaha Ciidamadda Xogga dalka Soomaaliyeed S/G Daahir Aaden Cilmi Indha-qarshe iyo xubno kale oo ka socday Wasaaradda.
Is bedelo laga yaabo in lagu sameeyo Taliyeyaasha Ciidamada dowladda Soomaaliya (Warbixin)
Warar xoogan oo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in is bedel lagu sameyn doona Taliyeyaasha ciidamada dowladda Soomaaliya, iyadoo is bedelkan lagu saleyn doono qaabka awood qeybsiga.
Ciidammo ka Tirsanaa Milateriga Soomaaliya oo ku Geeriyooday Shil Baabuur
Wararka laga helayo deegaanka Cali-yaale ee gobolka Shabeellada dhexe ayaa sheegaya inay saddex askari oo ka tirsan ciidanka dowladda ay ku geeriyoodeen shil gaari oo ka dhacay deegaankaa shalay gellinkii dambe.
Xog cusub oo laga hayo baaritaanka Meydka taliyahii Booliska Soomaaliyeed
Taliyihii Ciidanka Booliiska Somaliyeed Max’ed Sheekh Xasan Ismaaciil oo maalintii khamiista eheyd ku geeriyooday Isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho ayaa wali meydkiisa waxa uu yaalaa Nairobi.
Deeq-bixiyeyaasha oo taageero u ballanqaaday dhismaha ciidamada Somalia
Dalalka deeqaha bixiya ayaa taageero lacageed ugu deeqay ciidamada dowladda Somalia, si loo tayeeyo awoodda ciidamada dowladda, kaddib kulan maalin ah oo shalay ka dhacay magaalada London ee xarunta Britain.
Ciidamada Huwanta ah oo Qabsaday deegaanno ka tirsan Gobolka Galguduud
Wararka laga helayo gobolka Galguduud ayaa sheegay inay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa ka socda dalka Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ay la wareegeen deegaanno ka tirsan gobolkaas.
Maxkamadda darajada koowaad oo xukunno dil iyo xabsi ah ku ridday 13 qof
Maxkamada ciidanka qalabka sida ayaa xukuno dil iyo xabsi daa’in ah ku ridday shalay13 qof oo dhallinyaro ah, kuwaasoo horay xukunno ay ugu ridday maxkamadda kuna xirnaa xabsiga dhexe ee Xamar, iyadoo lagu eedeeyay inay xabsiga ku dhex-dileen maxbuus kale.
Daawo Sawirada “ Sadax Nin uu ku jiro Ninkii Fududeeyay Weerarkii Madaxtooyada oo la toogtay
Sagal Radio Services • News Report • August 3, 2014
Maxkamada Ciidanka qalabka sida Dowlada Soomaaliya ayaa saakay xukun dil ah waxa ay ku fulisay Sadax nin oo katirsanaa Xarakada Al-Shabaab uu ku jiro ninkii fududeeyay Weerarkii dhawaan lagu qaaday Xarunta Madaxtooyada Villa Soomaaliya.
Maxkamadda Ciidamada oo Saaka Toogatay Xubno ay Horay Dil ugu Xukuntay
Maxkamada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka xukun dil ah ku fulisay afar ruux oo ay horay xukunno dil ah ugu ridday, kuwaasoo la sheegay inay ka tirsanaayeen Al-shabaab.
Maxkamadda Ciidamada oo Fulisay Xukun dil ah oo ka duwan kuwa ay horay u fulisay
Maxkamada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay shalay xukun deg-deg ah ku fulisay ruux la sheegay in uu ka tirsanaa Al-shabaab oo lagu soo qabtay qori hoobiye ah.